I-Apple ithenga ukuqondwa kwemifanekiso yokuQalwa kweRegaind | Ndisuka mac
Akumangalisi ukwazi ukuba iApple ifumene inkampani entsha kwicandelo. Nyaka ngamnye zenzeka amatyeli aliqela. Kwaye eli xesha lithuba Isiqalo esincinci saseFrance esibizwa ngokuba yiRegaind. Le nkampani encinci izinikele ekuhlalutyeni iifoto ngokusebenzisa ubukrelekrele bokufakelwa.
Ukuthengwa akukho semthethweni yiApple, kodwa TechCrunch, portal ebhengeze ulwazi, ibhengeza oko ukuthengwa kwenziwe kwasebenza ngokuxabisa i-500.000 yeedola (malunga ne-400.000 ye-euro ngexabiso lotshintshiselwano). Kwakhona, i-portal yetekhnoloji iqhakamshele abo baseCupertino kwaye amagama ambalwa abe yimpendulo: "I-Apple ithenga iinkampani zobuchwephesha ezincinci amaxesha ngamaxesha, kwaye ngokubanzi asixoxi ngeenjongo zethu okanye izicwangciso zethu.
Kwelinye icala, le ntshukumo ikwasebenza nokwazi ukuba zithini iinjongo zenkampani. Kwaye kule meko siyazi ukuba icandelo lokufota libaluleke kakhulu kuApple; Kuya kufuneka ujonge kule minyaka imbalwa idlulileyo kunye nokusungulwa kweemveliso zabo. Ngeli xesha, nangona iApple sele inetekhnoloji eyaziwayo kwiifoto kwaye inokhangelo olusisilumko kwisicelo sayo seefoto, Ukuphuhliswa kukaRegaind kuya kwelinye inyathelo.
Kuyaziwa kwakhona ukuba uGoogle usebenza kwicandelo elinye; Kuyenzeka ukuba uphendle ngobuchule kwizicelo zeefoto zikaGoogle. Nangona kunjalo, el isoftwe Ukusuka kuRegaind unokufumana ulwazi ngakumbi. Umzekelo, njengoko iTechCrunch ichaza, ukuba sidubula kwimowudi yokugqabhuka, ukukhula kukaRegaind kuyakwazi ukwahlula eyona shoti yakho ibalaseleyo kwaye uyibonise kwiphepha elingaphandle. Kwakhona, kuya kwenzeka Lahla ngokuzenzekelayo iifoto eziphindiweyo okanye wenze iividiyo zokudibanisa. Ngamanye amagama, kuya kubakho isicelo esisebenza ngakumbi nesicwangcisiweyo.
Kwelinye icala, i isoftwe yokuqalisa French is Uyakwazi ukwahlula phakathi kwesini, ubudala kunye neemvakalelo. Ngaba ayikhali intsimbi? Ngokuchanekileyo, i-ID yobuso. Ngoku, asazi ukuba ezinye zale software zinokudityaniswa kunye nokufika kwe-iOS 11, into ecacileyo kukuba enkosi kolu thenga uphuculo luseza kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ithenga iRegaind, ukuqala kokuqatshelwa komfanekiso
IMacOS ePhakamileyo yeSierra Beta, i-HEVC, iNkqubo yeFayile ye-APF kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac